Semalt: Izinyathelo Ezinhlanu Ezizokwenza Ngokutheleleka Nge-Malware
I-intanethi inezinkulungwane zezingozi ezisongelayo, okwenza indawo engozini kubasebenzisi be-inthanethi. Kukhona amagciwane amasha angaphezu kuka-74,000 athuthukiswe nsuku zonke nge-malware ethinta ama-computer angu-30% emhlabeni jikelele.
I-Malware yizwi elihlanganisiwe kusuka kwisofthiwe enonya futhi laklanyelwe ukwenza indlela yayo ngokusebenzisa uhlelo lokuvikela lekhompyutheni futhi lenze umonakalo kumshini osebenzayo osebenzisa ukufinyelela kwi-intanethi, ibhizinisi, noma ngaphezulu. U-Nik Chaykovskiy, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uthi kungase kubonakale kunzima kakhulu, kodwa ezinye izindlela zinganquma noma zivimbele umonakalo kudivayisi kanye nedatha elondolozwe ngaphakathi.
Ngokuvamile, uma umuntu egijima iseshini ye-intanethi kusiphequluli sewebhu, amawindi amaningi we-popup avela ngaphandle. Baziwa ukuthi bacele umsebenzisi ukulanda futhi asebenze isofthiwe ethile. Indlela yokuzivikela yesistimu yokusebenza igxila njalo futhi ibuze ukuthi umthombo uthembekile yini. Iphuzu lapha kuphela ukuqhuba izinhlelo ezinesignesha yedijithali.
Ezinye zezinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo yizinhlelo ze-antivirus, ezihlola isistimu ukuze ziqinisekise ukuthi inhloso yefayela elilandiwe nokuthi ngabe ikhompyutha isalokhu ivikelekile ngokuchofoza ku-popup. Lokhu kuvela kungase kube ukuqala kwengqungquthela ekhanda le-malware uma ilandwa ngokungaqondakali.
Yenza iphuzu lokuvuselela uhlelo lokusebenza kanye ne-antivirus njalo. Into engcono kakhulu yokwenza ukwamukela zonke izibuyekezo ngokuzenzekelayo. Umqondo ngemuva kwalokhu kubuyekezwa ukuthi bayasiza ukuxazulula amaphutha nokukhubazeka kusuka izinguqulo zangaphambilini. I-Malware ihlala ishintsha ngakho-ke isidingo sezibuyekezo ezijwayelekile. Abangena ngaphakathi bakuthola kunzima ukufinyelela kwinethiwekhi futhi kufanele babheke izindlela ezintsha zokudlulela lokhu, ngasiphi isikhathi, abathuthukisi bangase babe nokuvuselela okusha.
Gwema Ukuvula Okunamathiselwe Kwe-imeyili Okusolayo
Abahlaseli baye bathola kangcono izindlela ezintsha zokuthola ukungena emthethweni kumakhompiyutha womsebenzisi. Manje benza kanjalo besebenzisa ama-imeyli, iningi lawo ligaxekile. Njalo susa konke ugaxekile ngaphandle kokuwavula. Ama-imeyili avela avela emithonjeni ehloniphekile kuphela ukuthi ayengekho. Bajwayele ukwenza izihloko kanye nomyalezo kubalulekile ukudala umuzwa wokuphuthuma. Uma lezi zifinyelela ebhokisini lemilayezo engenayo, zithwebule ngokusebenzisa i-antivirus kuqala. Uma umuntu engakwazi ukuqonda ukuthi ubani othumele i-imeyili, kufanele abhubhise njengoba kungabakhokhela ngaphezu kwezempilo yabo kuphela.
Sebenzisa Amaphasiwedi e-Complex
Umthetho owodwa wokuthola i-intanethi kufanele uthathe izinyathelo ngamaphasiwedi asetshenzisiwe. Okulula kulula ukukhumbula, kodwa yiyona into eqondile ukuthi abagebengu be-cyber bafuna umsebenzisi ukuba acabange. Lapho bethola lawa maphasiwedi, azama ukuwasebenzisa kwamanye ama-akhawunti e-intanethi. Yingakho ochwepheshe beluleka abantu ukuthi basebenzise amaphasiwedi ahlukene kuma-akhawunti ahlukene. Iphasiwedi enhle kakhulu kufanele ibe nezinhlamvu eziyisishiyagalombili ubude futhi ihlanganise nezinhlamvu ezahlukene. I-quirkier, ingcono.
Gwema izinethiwekhi ezivulekile ze-Wi-Fi
Abaqashi bangasebenzisa amanethiwekhi avulekile njengoba besakaza i-malware kalula kuma-computer axhunyiwe ngezizathu eziningana. Gwema amanethiwekhi anjalo njengoba enikeza umhlaseli enqenqemeni ohlelweni lomsebenzisi.